Lwesine, ngoFebruwari 25, 2010 NgoMgqibelo, ngoJuni 27, 2015 UScott Hardigree
Kutshanje ndithathe intombi yam eneminyaka eyi-9 ukuya Lungisa, umthengisi weempahla zabantwana. Ukusukela ekuqaleni umphathi wandiqhushumbisa, ngemizuzu emi-5, kunye neengcebiso ngemveliso kunye nokunyuselwa. Oku kwaqhubeka kangangemizuzu engama-30 de ndanyanzelwa ukuba ndimfundise ukuqonda kwabathengi kunye nokukhetha kwabo.
Inkqubo ye-imeyile embi ifana nomntu ongasebenziyo wentengiso. Endaweni yokuba ufunde ukungathandeki ebusweni babathengi bakho, yiva ifuthe elibi kwintengiso, okanye kwimeko yam, yiva uburhabaxa bamagama abo; ukuthengisa nge-imeyile kunokukuxelela phantse yonke into ekufuneka uyazi malunga nabathengi bakho kwaye kukuncede uthengise ngaphezulu.
Ukuya Ngapha "Molo FNAME"
Ukuqonda okufunekayo ukwenza ukuba inkqubo yakho ye-imeyile ibe yinzuzo ngakumbi sele ikwiingcebiso zakho zomnwe kwaye akubizi. Iza kuwe ngohlobo lwedatha. Andithethi ukuba uvule kwaye ucofe idatha, nangona oko kuya kukuxelela okuninzi, ndithetha ngedatha eya kukuvumela ukuba uzenzele amava kumthengi ngamnye wakho.
Ngokuqinisekileyo, imibuliso eyenzelwe wena ihlala ifunyanwa kakuhle kodwa njengoko benditshilo kwi-Chief Marketer yamva nje inqakuIphulo loSuku lweValentine lokuma kulo nyaka zezo zisebenzisa idatha enzulu, ezinje ngembali yokuthenga kunye neeprofayili zabathengi, ukwenza izibonelelo zabo zibe zezobuqu kwaye ke zichaphazeleke ngakumbi. Kwinqaku, bendithetha kakhulu malunga nabathengisi kodwa iinkampani zenkonzo nazo zinedatha efikeleleka ngokulula yokulandela (okanye nokuqikelela) iinjongo zokuthenga zabathengi babo kunye nokuchonga amathuba okuthengisa kunye nokuthengisa.
Yintoni ekufuneka usebenze nayo?
Imithombo yedatha enokwenzeka ibonakala ngathi ayinasiphelo, kodwa nazi iindidi ezimbalwa kunye nemizekelo ethile:
Iprofayile: Khawufane ucinge ukuba uqhuba iarhente yokuhamba kwaye ndiyi-65 y / o ithemba lakho, ucinga ukuba ndingaphendula ngcono kunikezelo olubonisa iindawo eziphezulu ezithandwayo? Ngoku khawufane ucinge ukuba imifanekiso ekunikezelwayo yayiyileyo yokukholisa iinwele zesilivere. Okanye mhlawumbi ndikwixesha lasentshona kunxweme kwaye i-webinar yakho ishedyuli ye-1pm esempuma, ndingabanakho ukugcina isihlalo sam ukuba i-imeyile ifunde i-11am pacific?
Imbali yokuthenga: Ukuba ndizithengile izipho kumhla okanye malunga nomhla wanamhlanje, iminyaka emibini ilandelelana, ndingafuna ukuthenga enye kwakhona kulo nyaka? Kuthekani ukuba izindululo zezipho ezitsha ziyahambelana nokuthenga kwam kwangaphambili kwabo abanye abathengi bezipho? Kwelinye icala, ungathini ukuba sele ndiyithengile imveliso yakho ephambili, ucinga ukuba ndifuna ukuva ukuba ingakanani imali endinokuyigcina, ukuba bendilindile? Endaweni yoko, andinakukhetha ukwazi malunga neminikelo yakho yesibini?
Umsebenzi: Mhlawumbi ndikhuphele amaphepha amathathu amhlophe ngokulandelelana ngeentsuku ezingama-30, kodwa okwangoku andizukuthenga, ingaba ingumbono olungileyo ukundimemela kwingxoxo malunga neemfuno zam ezithile? Okanye mhlawumbi andikaphenduli kwizibonelelo zakho ngexesha elithile, ngaba ndilungile kwisibonelelo sokuvuselela okanye kuvavanyo lokoneliseka?
Okuthandayo: Khawufane ucinge ukuba uneemveliso ezili-10 ezahlukeneyo kodwa ndingumthengisi onomdla kuphela kwiimveliso 1-5. Akufanelekanga ukuba ndibekwe kwicandelo nabanye abathengisi? Kuthekani ukuba ndingumsebenzisi othe ngqo kodwa ndifuna ukufumana ulwazi ngemfundo, ngokuchaseneyo nokwazisa, kunokwenzeka ukuba ndihlale ndinomdla kwaye ndibelane ngolwazi lwakho ukuba ndifumana kuphela into endiyifunayo?
Kulula kwaye kungabizi ukwenza
Ndihlala ndimangalisiwe xa abathengisi be-SMB besithi ukusebenzisa idatha kweli nqanaba kuphela kubafana abakhulu. Oko kunokuba yinyani kule minyaka idlulileyo, kodwa namhlanje nayiphi na i-ESP exabisa ityuwa yayo idityaniswa ngokulula nezisombululo zakho zeCRM okanye ze-E-commerce kunye newebhu kubahlalutyi. Konke okufuneka ukwenze kukudibanisa kwaye okona kubaluleke kakhulu kuvavanye.
tags: umsebenziemailUmsebenzi we-imeyileukwenziwa kwe-imeyileUkukhetha i-imeyileiprofayile ye-imeyileukuthengwa kwe-imeyileimbali yokuthenga
Ukuzisa umsebenzi weTrafiki kaFacebook kuVavanyo lwakho
Mar 19, 2010 ngo 1:14 PM
Hayi, akukho lula kwaye akubizi ukuncamathelisa ukuthengwa kwabathengi njl kunye neenkqubo zokuthengisa nge-imeyile. Phantse zonke i-self-service ESP's aziboneleli nokuba iota yodibaniso. Kuhlala kuluxanduva lwe-POS app okanye i-app yakho ye-intanethi ukudibanisa kunye nokutyhala ulwazi olufanelekileyo "lokwahlula" kuqhagamshelwano lwe-ESP.
Ii-SMB zifuna into elula kunye nokuzinceda.